Mfe Split / Cut / Kpaa MKV Files na Windows / Mac
> Resource> tọghata> Olee otú iji kewaa / Cut / Kpaa MKV Files na Windows / Mac
"Olee otú gbawaa .mkv faịlụ na-enweghị re-ngbanwe ?? m pụtara otu kpọmkwem àgwà dị ka tupu." -Pitorasilo
Chọrọ kewaa a nnukwu MKV faịlụ n'ime multiple akụkụ-enweghị adịkwa video àgwà? Ọ bụrụ otú ahụ, isiokwu a bụ nnọọ n'ihi unu, na-ewebata a dị ike MKV kewara omume nke pụrụ inyere gị aka kewaa MKV faịlụ na lossless mma. Nke ahụ bụ Wondershare Filmora (mbụ Wondershare Video Editor) maka Win (Windows 8 na-akwado) (Filmroa maka Mac (Si Wondershare Video Editor for Mac)). M nzọ ị ga-masịrị ya dị ike na ọrụ na magburu onwe ya mma. Get nkọwa banyere otú kewaa MKV faịlụ n'okpuru.
Easy-eji MKV Splitter: Wondershare Filmora (mbụ Wondershare Video Editor)
Bee MKV ọ bụla ogologo enweghị ihe ọ bụla àgwà ọnwụ.
Kewaa anya ọ bụla nke nke gị MKV videos.
Real-oge preview ọrụ-enyere gị aka n'ụzọ ziri nnọọ ezi-ebipụ achọghị mkpachị effortlessly.
Azọpụta gị MKV faịlụ dị iche iche formats, ọkụ na-DVD ma ọ bụ ozugbo bulite online.
1. Import MKV faịlụ ka a MKV splitter
Download na wụnye a smart MKV video splitter. Mgbe na-agba ọsọ ya, ị nwere ike họrọ 16: 9 ma ọ bụ 4: 3 ruru nhọrọ ịbanye isi interface nke a MKV faịlụ splitter.
Mgbe mbubata mpaghara gị MKV faịlụ ka ngwa a. Ị nwere ike pịa "Import" nhọrọ Ibu Ibu MKV faịlụ ma ọ bụ ozugbo ịdọrọ MKV faịlụ site na kọmputa na-album.
2. Split MKV faịlụ
Ịdọrọ gị chọrọ MKV faịlụ site album ka usoro iheomume. Na mgbe ahụ ị nwere abụọ ụzọ asiak MKV faịlụ mgbe ị họrọ ya:
1. Dọrọ ihe mmịfe mmanya na n'elu nke red egosi bugharịa egosi ka kpọmkwem ebe ị chọrọ wee pịa Scissor bọtịnụ. Ị ga-achọpụta na nnukwu MKV faịlụ a kewaa abụọ n'akụkụ. (Biko mara: ị chọrọ ịhọrọ video tupu-akpụ akpụ na egosi site na ịpị ya.)
2. Kpọmkwem ịdọrọ otu video clip ka kpọmkwem n'ọnọdụ ebe ị chọrọ asiak MKV faịlụ, wee hichapụ kwukwara otu (n'ihi na mgbe ị tinye a video clip overlapping na ndị ọzọ na, na mgbe e mesịrị video ga-kewaa na-akpaghị aka). N'ezie, i nwere ike iji otú a ịgbakwunye a dị iche iche video clip na MKV faịlụ ma ọ dị mkpa.
3. Export otu MKV clip
Hichapụ ọzọ MKV mkpachị na dị nnọọ ahapụ otu MKV clip. Mgbe ahụ, pịa "Mepụta" bọtịnụ gbapụta mmepụta window, see Format taabụ, wee họrọ MKV mbupụ otu MKV clip ke kiet ke otu faịlụ.
Emeghe otu oru ngo ikwugharị Nhichapụ na mbupụ ọrụ. N'ụzọ dị otú a, ị pụrụ ime onye ọ bụla MKV clip dị mfe faịlụ.
Video Tutorial: Olee otú SPLIT MKV Video Files
Olee otú dezie MKV Videos na Windows na Mac
Olee otú mpikota onu MKV Video Files
Olee otú Jikọọ MKV Video Files
Olee otú Tinye ndepụta okwu ka MKV